विवाहको तयारी भएको घरमा उनैको काजकिरिया ! – News543Online
April 22, 2021 adminLeaveaComment on विवाहको तयारी भएको घरमा उनैको काजकिरिया !
– गुल्मी घमिर गाउँका लालप्रसाद पन्थी केहि दिन अघिसम्म छोराको विवाह गर्ने तयारीमा जुटिरहेका थिए । ‘यसै बैशाख महिनाको लगनमा माइलो छोरा यमलाल पन्थीको विवाह गर्नका लागि केटी माग्न कुरो समेत चलाइएको थियो ।’ उनै छोराको काजकिरियाको कुनोमा बसेका बाबु पन्थीले भने । दुर्भाग्य नयाँ वर्षको दिन घुम्न हिँडेका बेहुला बन्ने तयारीमा रहेका छोरा यमलाल पन्थी अर्को दिन शव बनेर फर्किए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका खरिदार रहेका उनी त्यसदिन अन्य कर्मचारीसहित प्यूठानको स्र्वगद्वारी दर्शन गर्न गएका थिए।
जिपले मोटरसाइकललाई ठ’क्कर दिदा सानै उमेरका अस्ताए छोराको मृ’त्यु, बाबु आमा घा’इते